Jaale Cute Raaxo Leh Oo Hal Qayb Ah Carruurta Gabdhaha Dabaasha |
Dhammaan gabdhaheena dabbaasha waxaa lagu sameeyaa dhar tayo sare leh waxayna ku safan yihiin labada dhinac ee hore iyo xagga dambe Dhammaan daabacadahayaga waxaa lagu heli karaa meydad badan marar badan oo leh 1-PC ama xulashooyinka 2-PC-ga ee dharka lagu maydho ayaa ku fiican dabbaasha caadiga ah. Waxaa laga heli karaa dhammaan hablaha tirada 2 thru 14 sidaa darteed gabdhaha walaalaha ah waxay ku garaaci karaan goobta xeebta koox ahaan Hubi kormeerayaashayaga iskuduwaha badan iyo kuwa ilaaliya si aad u sameyso heer sare!
Cabir Laab Dhexda Soo jeedi dherer
Qiyaasta gacanta ayaa ku kala duwanaan doonta 2-3cm.
Midabbo qurux badan, suudh qurux ah, oo ku habboon. FIIRO GAAR AH: Ka dib markaan dib u eegay faallooyinka ku habboon ee la xiriira calaamaddan, waxaan dalbaday cabbir ka badan cabbirka caadiga ah, si fiicanna wuu u habboon yahay (kaliya waxyar uun dabacsan). Ogsoonow in qofka xidhan uu aad u caato yahay.
Tani waa dharka ugu fiican ee dabaasha ee aan waligeen helnay. Midabada ayaa aad uga iftiimaya sida ay sawirka ugu jiraan. Taamku sidoo kale waa qumman yahay oo ma aha mid aad u adag ama caato ah oo dhan.
Hore: UPF50 + Xirmooyinka Qubayska Xagaaga ee Biyo-la’aanta Biyo-La'aanta Neef u Leh Xeebta
Xiga: 100% Nylon oo daabacan Gawaarida Ragga Dabaasha ee Ragga Gaaban